दिउँसो २ बजेको अपडेट : १ महानगर र ७ उपमहानगरमा को अगाडि ? - Digital Khabar – डिजिटल खबर
Home / समाचार / दिउँसो २ बजेको अपडेट : १ महानगर र ७ उपमहानगरमा को अगाडि ?
By Digital Khabar on July 1, 2017
काठमाडौं– चर्चामा रहेको विराटनगर महानगरपालिका र अन्य सात उपमहानगरपालिकामा रोचक भीडन्त देखिएको छ ।
शनिबार दिउँसो २ बजेसम्मको परिणाम अनुसार पूर्वी नेपालको ठूलो शहर विराटनगरमा काँग्रेसको अग्रता छ ।
विराटनगर महानगरपालिकामा कांग्रेसका भीम पुराजुलीको १९५४ मत आएको छ । एमालेका विनोद ढकाललाई १३६६ मत परेको छ । फोरमका उमेशकुमार यादवलाई १०१० मत परेको छ ।
त्यसबाहेक दाङका दुई उपमहानगरपालिकामा एमालेको अग्रता छ । घोराही उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसका भूपबहादुर डाँगी को ६०२८ मत र एमालेका नरुलाल चौधरीलाई ७९९० मत परेको छ । माओवादीका जीवन गौतमलाई ३८८० मत प्राप्त भएको छ ।
त्यसैगरी तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरीलाई ३२०० मत, एमालेका घनश्याम पाण्डेलाई ३६८४ मत र माओवादीका शेशुराम भण्डारीलाई ८५४ मत प्राप्त भएको छ ।
उता पूर्वी नेपालको इटहरी उपमहानगरपालिकामा काँग्रेसको अग्रता छ, जहाँ रोहित प्रसाईंलाई ३४१५ र एमालेका द्धारीकालाल चौधरीलाई ३१२८ मत प्राप्त भएको छ ।
नेपालगंज उपमहानगरपालिका काँग्रेस एमालेलाई पछि पार्दे राप्रपा अगाडि छ । राप्रपाका राणालाई ३७२३, कांग्रेसका डा. सुरेन्द्र कुमार कनौडियालाई २१४५, माओवादीका दामोदर आचार्यलाई २००९ मत प्राप्त भएको छ ।
यसबाहेक धरान उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसका तीलक राईलाई १९३२, एमालेका तारा सुव्वालाई १६८९ र माओवादीका अइन्द्रविक्रम नेम्वाङलाई ९९७ मत प्राप्त भएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा काँग्रेस अगाडि छ । कांग्रेस नृप बडलाई २२६६ मत, एमालेका दूर्गा जोशीलाई १९९७ मत र गोपाल हमाल स्वतन्त्रलाई १८३५ मत प्राप्त भएको छ ।
पाँच नम्वर प्रदेशमा रहेको बुटवल उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसका खेलराज पाण्डेलाई ४९९८ मत र एमालेका शिवराज सुवेदीलाई ५१०३ मत प्राप्त भएको छ ।
काठमाडौं जिल्लाका १० नगरपालिकामध्ये ७ मा कांग्रेस, ३…
Related ItemsBusinessdigital khabarElectionLocal Election 2074NationalNepalNewsPoliticsWorld
← Previous Story काठमाडौँ उपत्यकाका निजी विद्यालयमा हड्ताल